Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Nanangana vondron'asa hiatrehana ny COVID-19 ireo mpandraharaha mpizahatany India
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Enga anie 1, 2021
Ny Fikambanan'ny mpikarakara fizahan-tany indianina, IATO, dia nanangana vondron'olona mpiandraikitra hiatrika ny fanafihana ataon'ny onja COVID-19 hisambotra ny firenena.
Ny Fikambanan'ny mpikarakara fizahan-tany Indiana dia manao izay azony atao mba hanampiana amin'ny krizy ara-pahasalamana miharatsy.
Ny fananganana an'ity vondron'asa ity dia iray amin'ireo hetsika lehibe voalohany an'ny Komity Mpanatanteraka IATO vaovao.
Anisan'ireo zavatra maro tokony horesahina, ny Association dia miasa manampy amin'ny famatsiana oksizenina, fanafody ary fandriana hopitaly.
Ao anatin'ny ezaka hanampiana ny mpikambana ao aminy hiatrika toe-javatra mipoitra avy amin'ny fiparitahan'ny areti-mifindra COVID-19 coronavirus sy ireo karazany hafa ao aminy, ny Fikambanan'ny mpikarakara ny fizahan-tany dia manao izay rehetra eritreretiny hanampiana amin'ny krizy ara-pahasalamana miharatsy.
Ny fananganana an'ity vondron'asa ity dia iray amin'ireo hetsika lehibe voalohany amin'ny vaovao IATO Komity mpanatanteraka, izay nanatri-maso ny fifidianana an'i Rajeev Mehra ho filohan'ny fikambanana.